कति दिन बस्नुपर्ने हो होम आइसोलेसनमा ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार कति दिन बस्नुपर्ने हो होम आइसोलेसनमा ?
कति दिन बस्नुपर्ने हो होम आइसोलेसनमा ?
२०७७, २० कार्तिक बिहीबार १८:२२
गण्डकी प्रदेशका सदस्य मोहन रेग्मी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि ४० दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बसे। पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएपछि उनले थप चारपटक परीक्षण गराउँदा पनि उनमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो। पाँचौ परीक्षणमा बल्ल उनको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्र रेग्मी घरबाट बाहिरिए।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। कोरोना भाईरस संक्रमण पुष्टि भएपछि नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यताले संक्रमित पिरलोमा छन्। कुनै लक्षण नभएपनि कतिदिनपछि बाहिर हिडडुल गर्न मिल्छ भनेर स्पष्ट नहुँदा संक्रमितलाई मानसिक तनाव हुने गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका उनीहरु भन्छन, ‘कति दिनसम्म घरभित्र एक्लै थुनिएर बस्ने हो ?
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म झन्डै ८ हजार ५ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा बसेका उनीहरुमा शारिरिक रुपमा खासै समस्या छैन। होम आइसोलेसनमा बसेका उनीहरु पीसीआर परीक्षण गराएर नेगेटिभ रिपोर्टको प्रतिक्षामा रहेर बारम्बार परीक्षण गराएपनि पोजेटिभ रिपोर्ट आउँदा मानसिक तनाव हुने गरेको बताउँछन्।
‘४० दिनसम्म घरभित्र थुनिएर बसँे। सुरुको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि घरभित्र थुनिए,’ रेग्मीले भने, ‘आइसोलेसनमा बसेको एकसातापछि त पक्कै नेगेटिभ रिपोर्ट आउला भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यो भएन, हप्तैपिच्छे गरेको परीक्षणमा ४० दिनपछि बल्ल नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। ’ होम आइसोलेसनमा बसेको त्यो अवधिमा आफुलाई कुनै शारिरिक समस्या नपरेपनि मानसिक तनाव भएको उनले बताए।
‘मलाई कुनै लक्षण नै थिएन। बरु पहिलो पटक पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि तीनदिनसम्म मानसिक तनाव भयो, त्यो बेला बिरामी भएजस्तो अनुभव गरे,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि केही समस्या थिएन। तर, घुमघाम र घर बाहिर निस्कने बाटो खुल्न लामो समय लाग्यो। त्यसले मन आत्तियो। ’
हरेक पटकको परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्टको पर्खाइ हुने गरेपनि त्यो अनुसार नहुँदा तनाव हुने गरेको उनले अनुभव सुनाए। ‘म यतिसम्म ढुक्क थिए की पोजेटिभ पछिको पहिलो परीक्षणमै नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ भन्ने थियो। तर, त्यो भएन,’ रेग्मीले भने, ‘मलाई कुनै समस्या थिएन।
तर, घुमघाम र भेटघाट बर्जित भयो। त्यसले गर्दा हामी राजनीति गर्ने र जनतामाझ जाने व्यक्तिलाई छटपछि हुन रहेछ। ’ रेग्मीले १४ दिनपछि त अरुलाई संक्रमण सर्दैन र आफुलाई पनि समस्या हुँदैन भन्ने भएपनि त्यो बारे जनतालाई अन्योल रहेको बताए।
‘कतिदिनसम्म नेगेटिभ रिपोर्टको पर्खाइमा बस्ने भन्ने हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब १४ दिनपछि घरबाहिर हिड्न मिल्छ भनेर स्पष्ट परिदिनुपर्छ। नत्र नेगेटिभ रिपोर्ट कुर्दा कति महिनासम्म घरको कोठामा थुनिएर बस्ने भन्ने मात्र हो। ’ बाध्यात्मक परिस्थितिले घरभित्र थुनिदा समस्या हुने उनले बताए। ‘बारम्बारको रिपोर्ट सोचे अनुकुल नआउँदा व्यवहारिक रुपमा मानसिक तनाव हुने रहेछ। १४ दिनपछि संक्रमण हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पन मनले भने नेगेटिभ रिपोर्ट नै खोज्ने रहेछ,’ उनले भने।
पोखरा–६ का कृष्णमणि बरालको होम आइसोलेसनमा बसेको विहीबार ३१ दिन पुग्यो। उनले यो बीचमा दुईपटकसम्म पीसीआर परीक्षण गराए, तर, रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। पोजेटिभ रिपोर्ट आएका कारण उनी घरबाट बाहिरिन पाएका छैनन। यतिसम्मकी घरकै परिवारलाई पनि भौतिक रुपमा भेटन पाएका छैनन। लामो समयसम्म नेगेटिभ रिपोर्ट नआउँदा आफुले आफैलाई बिरामी ठान्ने गरेको उनले बताए।
‘अब त नेगेटिभ रिपोर्ट आउला भन्यो, तर पोजेटिभ आउँदा मन अमिलो हुन्छ,’ बरालले भने, ‘नेगेटिभ रिपोर्ट आउला र घरबाहिर निस्कन पाउँला भन्ने सोचेको हुन्छु। तर, रिपोर्ट सोचेजस्तो नआउँदा मन खिन्न हुने रहेछ। ’ नेगेटिभ रिपोर्ट नआउँदा अझै पनि केही समस्या हुने हो की भन्ने त्रास बढ्ने उनले बताए।
‘मेरो शारिरिक अवस्था पहिले झै छ। म पूर्ण रुपमा स्वस्थ छु। तर, मलाई स्वस्थ रहेको प्रमाण दिने रिपोर्ट हात परेको छैन,’ बरालले भने, ‘घरभित्रै बस्नुपर्दा मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने रहेछ। स्वस्थताको अनूभूति गर्न पाएको छैन। ’ पोजेटिभ रिपोर्ट आएर निजी अस्पतालमा यस्तै लामो समय आइसोलेसनमा बस्ने हो भने नेगेटिभ रिपोर्टकै पर्खाइमा खर्चिलो उपचार हुने उनले सुनाए। ‘अब त म ठिक भएको छु भन्ने कन्फिडेन्ट रहेपनि रिपोर्टले कमजोर बनाउने रहेछ,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा.बिनोदबिन्दु शर्मा भने संक्रमण पुष्टि भएको १४ दिनपछि कुनै समस्या नहुनेले परीक्षण गर्नु नपर्ने बताउँछन्।
संघीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा समस्या नभएका व्यक्तिले १४ दिनपछि परीक्षण गर्नु नपर्ने गरि छुटकारा पाउने गरि निर्णय गरेको बताए। ‘पोजेटिभ रिपोर्ट आउँदैमा समस्या हुँदैन। १४ दिनपछि अरुलाई सर्दैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त १० दिनपछि सर्दैन भनिरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘तर, नेपालमा सरकारले १४ दिनको मापदण्ड तोकेको छ। १४ दिनपछि बाहिरिएको व्यक्तिले थप एकसातासम्म सतर्कता अपनाउँदा उत्तम हुन्छ।
तर थुनिएर घरभित्र बस्नु पर्दैन। ’ प्रदेश सरकारले समस्या नभएका संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज भएको मान्ने र अस्पतालले पनि त्यही अनुसार घर पठाउँदै आएको उनले बताए। ‘भाइरस मरेको भेटिँदा पोजेटिभ आउने हो तर, डराउनुपर्दैन। बारम्बार पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भनेर तनाव लिन जरुरी हुँदैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ फिजिसियन डा. बुद्धिबहादुर थापा बारम्बार पोजेटिभ रिपोर्ट आउँदैमा डराउनु नपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले सुरुको गाइडलाइनमा १४ दिन अवधि तोकेको थियो। ‘१४ दिन पछि भाइरस अरुमा सर्दैन, १४ दिनपछि बाहिर आउन सकिन्छ भन्ने थियो,’ थापाले भने, ‘अहिले सरकारले १० दिनपछि परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ आए घर पठाउने, पोजेटिभ आएपनि लक्षण नभए घर पठाउने, लक्षण भए केहीदिन राख्ने भन्ने छ। ’ धेरैपटक परीक्षण गर्न जरुरी छैन भन्ने सरकारी भनाई रहेको उनले बताए।
‘लक्षण नभएका बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्ने हो, त्यसैले १४ दिनपछि भाइरस एक्टिभ हुँदैन,’ उनले भने, ‘तीनहप्ता त अझै सुरक्षित मानिन्छ। १४ दिनपछि बाहिर निस्कन सकिन्छ, तर, तीनहप्ता उत्तम हो। ’ भाइरसको बाह्य रुप, कण र टुक्रा रहँदा बारम्बार पोजेटिभ रिपोर्ट आउने गरेको उनले बताए। ‘दुई सातापछि भाइरस सक्रिय हुँदैन भन्ने सन्देश जनताले नपाएकोले यो समस्या भएको हो,’ उनले भने। सामाजिक समस्या र दुव्र्यवहारका कारण पनि नेगेटिभ रिपोर्ट खोजी हुने गरेको उनले बताए। Source: Nagariknews.com
Previous articleमंगलामा देउँसी-भैलो खेल्न पूर्णरुपमा रोक
Next articleकुश्माका तेह्र बर्षिय बालकले गरे बिश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्प